Liverpool oo wali la joojin la’ayahay kaddib markii ay guul dirqi ah ka soo heshay Wolverhampton… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye January 23, 2020
(England) 24 Jan 2020. Liverpool ayaa wali la joojin la’ayahay kaddib markii ay guul dirqi ah ka soo heshay Wolverhampton oo ay ku booqatay Molineux Stadium, waxayna kaga soo adkaatay 1-2, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay Liverpool.
Daqiiqadii 8-aad kooxda Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Jordan Henderson, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Trent Alexander-Arnold.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican, iyagoo abuuray fursado badan ee goolal loo filan karay.
Daqiiqadii 51-aa kooxda martida loo ahaa ee Wolverhampton ayaa heshay goolka bar-bardhaca waxaana dheesha 1-1 ka dhigay Raul Jimenez, kaddib markii uu goolkan si qurux badan kaga caawiyay Adama Traore.
Daqiiqadii 86-aad kooxda Liverpool ayaa markale hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-2 ka dhigay Roberto Firmino, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Jordan Henderson.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 1-2 ay kaga adkaatay Liverpool kooxda Wolverhampton oo ay marti ugu aheyd Molineux Stadium.
Ronaldo: "Haddii aan guursado xaaska Luis Figo waligeey guriga kama soo bixi lahayn"